Malunga - iNantong Global Packaging Products Co., Ltd.
Ukusukela ngo-2000, iNantong Global Packaging Products Co., Ltd. yenye yezona mveliso zinkulu zokupakisha izithambiso kunye neyeza ezifumaneka eHaimen Nantong, kwiPhondo laseJiangsu, China. Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhombisa iimveliso zeglasi ezivumela abathengi ukuba babenakho ukuzenzela iipakethe zabo.
Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya iibhotile zeglasi yeziqholo, iibhotile zeenzipho, ioyile yeatomizer yeatomizer, iibhotile zeoyile eziyimfuneko, iibhotile zeglasi, iibhotile zeplastikhi, iminqwazi yealuminium, iimpompo, iibhotile zeplastiki kunye neendidi ezahlukeneyo zokutya kunye neebhotile zesiselo.
Sineziko le-5 kunye nemigca yokuvelisa eyi-15, imveliso yemihla ngemihla ngaphezu kweziqwenga eziyi-1.5 zezigidi. Singadala iphakheji yakho nganye, kubandakanya amandla okubumba abucala, anezinto ezigqwesileyo ezifumanekayo zokuhlola isilika, isilivere okanye igolide eshushu yokunyathela, ukutshiza umbala, i-asidi, i-sticker, ukudlulisa ubushushu, i-ect. Sinikezela ngeendlela ezintsha nezingafaniyo zokuhlangabezana nokupakisha kunye nokuhambisa kwakho imiceli mngeni kuyilo olwenziwe ngokwezifiso. Iqela lethu loyilo linobuchule bokubuza imibuzo efanelekileyo kwaye linike ezona zisombululo zilungileyo zifunekayo kuyilo lwakho lokupakisha ngexabiso lokhuphiswano. Sibambe umgaqo "wokuqala" ukwanelisa iimfuno zabathengi ezininzi. Inkqubo yokujonga esemgangathweni yeStrick inokubonelelwa. Ngamafutshane, sibonelela ngenkonzo yokumisa enye kubathengi.
Siya kwimiboniso eyahlukeneyo yobuhle minyaka le, njenge-Beautyworld eDubai, iCosmoprof Las Vegas, i-Intercharm Beauty Fair eRashiya, iCosmoprof Asia e-HK, e-Viet Beauty eVietnam njalo njalo. Ukusuka kwezi ntshukumo, sihlangana nabahlobo abatsha kwaye sivumela abathengi abaninzi nangakumbi ukuba basazi.
Njengomnye wabathengisi abakhulu bokupakisha kunye neengcali ezinamava kule ntsimi e-China, sele sithumela iimpahla zethu kumazwe angaphezu kwama-50 kwihlabathi liphela, njengePakistan, iRussia, iPoland, iArgentina, iVietnam, iMalaysia, iUSA, iUK, iGrisi, Switzerland ... Amava amade kule ndima kunye nomgangatho ophezulu wenqanaba eliphezulu kukhokelele inkampani yethu kwilizwe elidumileyo.
Ubuhle beLizwe laseDubai Umboniso woBuhle
Umboniso woBuhle baseAsia Pacific
Umboniso woBuhle eLas Vegas
Umboniso woBuhle beHBA
I-Intercharm yoBuhle baseRussia
Ubuhle be-Iran kunye nococekileyo